Vonona amin’ny Demokrasia ve ny malagasy? | mandimby maharo
Vonona amin’ny Demokrasia ve ny malagasy?	Posted on 4 October 20124 October 2012 by Mandimby Maharo	« Vonona amin’ny demokrasia ve Malagasy ?»
Fanontaniana napetraka tamin’ireo tanora tafavory tao amin’ny Ivontoeran-gazety malagasy omaly alarobia 03 oktobra io. Fivoriana izay nokatakatain’ny Youth Civic Center sy ny Ambasady amerikna ao anatin’ilay fandaharana Kôzy Liberty. Adihevitra sy fakan-kevitra moa no natao ka samy nanana anjara fitenenana avokoa iro izay nanatrika ity fotoana ity. Nisongadina tamin’izany ary ny hevitra fa vonona ny malagasy raha toa ka feno ny fepetra rehetra hisian’ny Demokrasia eto Madagasikara. Namaritra fepetra maromaro ihany moa ireo mpivory tamin’izany ka ny voalohany amin’ireny dia ny famerahana ny rafitra afahan’ny rehetra mandray anjara amin’ny fampandehanam-panjakana.
Na dia misy tokoa manko ireo rafitra isan’ambaratonga dia mbola misy hatrany ny elanelana eo amin’ireo vahoaka sy ny mpisolotena azy. Ireo mpisolo tena ny vahoaka izay tsy iza fa ireo olom-boafidy. Maro amin’izy ireny no tsy mitondra ny hevitry ny olona nifidy azy akory fa izay mampety ny toerany no ataony. Ny antony mahatonga izany dia noho ny goragora eo amin’ny fanarahamaso. Eo koa ny fepetra takiana ho an’izay te hirotsaka ho fidina ka izay manam-bola sy mahavita misehoseho no lany fa tsy izay tena hanome fahafaham-po ny olona nifidy azy. Tokony hisy noho izany ny fanamboarana sy fanatsarana ny rafitra sy ny lalàna mifehy io rafitra io mba hampisy fifandraisana bebe kokoa ny mpitondra sy ny vahoaka. Eo ihany koa ny olona ateraky ny fisian’ny olom-boatendry be loatra. Izy ireny dia matetika ny hanatanteraka ny baiko avy any ambony no mahasahirana azy fa tsy mandrafitra ny tetik’asa entina ampandrosoana ny faritra nametrahana azy. Ankoatry ny rafitra dia eo koa ny tsy fandraisan’ny olona eny am-potony ny anjara tandrify azy fa miandry ny avy any ambony hatrany. Mahakivy hoy ireto tanora ireto ny maheno lava ny fandavan’ny lehibe ny tolo-kevitr’izy iro ety. Leo ny manolotra hevitra nefa tsy misy mpihaino ny olona ka aleony mitazam-potsiny. Inoana nefa, fa raha misy tetikasa 3 nalaina avy amin’ny hevitr’ireo mponina isam-pokotany ka tanterahina izany dia havitrika ny olona amin’ny fandraisana antanana ny ho aviny ka hipetraka ho azy ny demokrasia.
Izany rehetra izany nefa tsy ho tanteraka raha tsy dieny izao dia omena fahalalana momba ny tena demokrasia ny malagasy. Tsy tokony ho resabe fotsiny ny hoe ny rehetra dia tokony hahay lalàna sy eo ambany lalàna fa mila ampianarina sy ampiharina izany. rehefa mahay ny lalàna ny ny olona dia hainy ny mampiasa ny fahafahany. Ary hainy koa ny fotoana sy toerana hampiasany ny zony sy ny andraikiny. Izany dia hiteraka filaminana ara saosialy ka hampirindra ny aara toekarena
Mangetaheta demokrasia ny malagasy. Ilana ny fiarahan’ny rehetra nefa ny fametrahana ireo fepetra ireo mba tsy ho demokrasia sadasada no amahanan-dalitra ny vahoaka. Ny demokrasia mitondra makany amin’ny fampandrosoana no tena mila ampiharina. Manana adidy lehibe amin’izany ireo mpampianatra sy mpanabe any antsekoly sy any amin’ireo fotom-pinoana maro samy hafa. Apetraka ao an-tsaina sy ao amin’ny fomba fiainana andavanandro dieny mbola kely ny fahaizana mandala ny demokrasia sy fankatoavana lalàna. Tompon-anjara amin’ny fambolena ny demokrasia koa ny mpanao gazety sy ny haino aman-jery. Tsy ny fidradradradrana no midika fa misy ny demokrasia fa ny fanomezana ny vaovao mahasoa sy manabe. Anisan’ny mpitaiza ny fiarahamonina izy ireo ka mila mahafehy ny asany. Ary isan’ireo mpandray anjara fototra amin’ny fametrahana ny demokrasia eto Madagasikara ny mpanao politika. Izy ireo no vovonana iadian’ny lohany ka tokony hanana ny maha izy azy. Tsy ny fanononononana ny teny demokrasia no mampisy azy fa ny fametrahana ny lamina hampitsiry izany no tena anton’asany.
Tags: Demokrasia, Malagasy, politique, TanoraCategories: politique, societé